Hannibal Rising (2007) | MM Movie Store
Crime Horror Thriller Uncategorized
(ဇာတျလမျးအကဉျြး)ဟာနီဘဲလျနဲ့ သူ့ညီမလေးမီရှာ တို့က အရမျးခဈြကွတဲ့ မောငျနှမ ၂ယောကျပါစဈအတှငျး သူတို့မိသားစု စဈရှောငျဖို့ အတှကျ တောထဲက စံအိမျတဈအိမျမှာ သူတို့ ပုနျးပွီးနနေကွေတယျတဈနေ့ အဲ့စံအိမျနားမှာ လာပွီး ဗုံးတှခြေဲတော့ သူ့တို့ မိဘတှသေဆေုံးသှားခဲ့တယျ
စံအိမျကွီးမှာ ဟာနီဘဲလျနဲ့ သူ့ညီမလေး မီရှာ၂ယောကျထဲ ကနျြခဲ့ရှာတယျကလေးတှဆေိုတော့ အစာလညျးမရှာတတျတော့ မီရှာလေးက နမိုးနီးယားဝငျပါလရေောအဲ့အခြိနျ သူတို့နတေဲ့ စံအိမျဆီကို စဈပွေးစဈသားအုပျစု တဈစု ရောကျလာကွတယျ
ကလေး၂ယောကျကို တှတေ့ော့ သူတို့က ကလေး၂ယောကျထဲက နမိုးနီးယားဖွဈနတေဲ့ မီရှာလေးကို သတျစားလိုကျကွတယျအဲ့ မွငျကှငျးကို အစဆုံးမွငျရတဲ့ ဟာနီဘဲလျခငျမြာ စိတျထဲနာကညျြးနပွေီး သူကွီးလာရငျ လကျစားခဖြေို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တယျ
ဒါပမေယျ့ သူက ငယျသေးတော့ အဲ့အဖွဈအပကျြကို ခပျရေးရေး မှတျမိတော့ စဈသားတှရေဲ့ နာမညျတှမေသိဘူးဖွစိနတေယျနောကျပိုငျး ဘယျလိုတှေ ဆကျဖွဈမလဲ …. ဟာနီဘဲလျကရော လကျစားခနြေိုငျမာလား…သူ့သရုပျမှနျကရော ဘာလဲ ဆိုတာ ဆကျကွညျ့ကွပါဦးလို့
Prequel – Hannibal Rising မတိုငျခငျ Silence of the Lambs, Hannibal နဲ့ Red Dragon ကို စာရေးဆရာ Thomas Harris’ က အရငျထုတျဝခေဲ့ပါတယျ
Hannibal Rising ကတော့ Hannibal Lectar ရဲ့ ၅ခုမွောကျသော Film ပါThomas Harris’ က ရေးသားတဲ့ Lectar ရဲ့ ဇာတျလမျးပွောငျးလဲမှု အဆငျ့ဆငျ့ လို့ပွောရငျလညျးရပါတယျ
Hannibal Rising ကနောကျမှထှကျပမေယျ့ အစဉျလိုကျတိုငျးခံစားခငျြတယျဆိုရငျ Hannibal Rising – Red Dragon/Man Hunter – Silence of the Lambs -Hannibal (movie) ဆိုပွီး recommand ပေးထားတာတှရေ့ပါတယျဟာနီဘဲလျက Pop Culture မှာနာမညျတျောတျောကွီးတဲ့ Villain အပွငျ ရုပျရှငျသမိုငျးမှာလညျး နာမညျအကွီးဆုံး လူသားစားလူသတျသမားဖွဈခဲ့ပါတယျ
သူက လူတှရေဲ့စိတျကိုကောငျးကောငျးနားလညျတဲ့အတှကျ လှယျလှယျကူကူ အေးအေးဆေးဆေး နှိပျစကျပွီးမှ သတျတဲ့နရောမှာ အထူးကြှမျးကငျြပါတယျSequel – Hannibal Rising ကားထှကျအပွီးမှာတော့ 2013-2014 လောကျမှာ Hannibal Series ဆိုပွီး Series တဈခုထပျထှကျပါတယျ ပွီးတော့ သူနဲ့ဆကျစပျမှုရှိတဲ့ Clarice ဆိုတဲ့ရုပျရှငျလညျး 2021 မှာထှကျတော့မှာပါ
(ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း)ဟာနီဘဲလ်နဲ့ သူ့ညီမလေးမီရှာ တို့က အရမ်းချစ်ကြတဲ့ မောင်နှမ ၂ယောက်ပါစစ်အတွင်း သူတို့မိသားစု စစ်ရှောင်ဖို့ အတွက် တောထဲက စံအိမ်တစ်အိမ်မှာ သူတို့ ပုန်းပြီးနေနေကြတယ်တစ်နေ့ အဲ့စံအိမ်နားမှာ လာပြီး ဗုံးတွေချဲတော့ သူ့တို့ မိဘတွေသေဆုံးသွားခဲ့တယ်
စံအိမ်ကြီးမှာ ဟာနီဘဲလ်နဲ့ သူ့ညီမလေး မီရှာ၂ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့ရှာတယ်ကလေးတွေဆိုတော့ အစာလည်းမရှာတတ်တော့ မီရှာလေးက နမိုးနီးယားဝင်ပါလေရောအဲ့အချိန် သူတို့နေတဲ့ စံအိမ်ဆီကို စစ်ပြေးစစ်သားအုပ်စု တစ်စု ရောက်လာကြတယ်
ကလေး၂ယောက်ကို တွေ့တော့ သူတို့က ကလေး၂ယောက်ထဲက နမိုးနီးယားဖြစ်နေတဲ့ မီရှာလေးကို သတ်စားလိုက်ကြတယ်အဲ့ မြင်ကွင်းကို အစဆုံးမြင်ရတဲ့ ဟာနီဘဲလ်ခင်မျာ စိတ်ထဲနာကျည်းနေပြီး သူကြီးလာရင် လက်စားချေဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်
ဒါပေမယ့် သူက ငယ်သေးတော့ အဲ့အဖြစ်အပျက်ကို ခပ်ရေးရေး မှတ်မိတော့ စစ်သားတွေရဲ့ နာမည်တွေမသိဘူးဖြစိနေတယ်နောက်ပိုင်း ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲ …. ဟာနီဘဲလ်ကရော လက်စားချေနိုင်မာလား…သူ့သရုပ်မှန်ကရော ဘာလဲ ဆိုတာ ဆက်ကြည့်ကြပါဦးလို့
Prequel – Hannibal Rising မတိုင်ခင် Silence of the Lambs, Hannibal နဲ့ Red Dragon ကို စာရေးဆရာ Thomas Harris’ က အရင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်
Hannibal Rising ကတော့ Hannibal Lectar ရဲ့ ၅ခုမြောက်သော Film ပါThomas Harris’ က ရေးသားတဲ့ Lectar ရဲ့ ဇာတ်လမ်းပြောင်းလဲမှု အဆင့်ဆင့် လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်
Hannibal Rising ကနောက်မှထွက်ပေမယ့် အစဉ်လိုက်တိုင်းခံစားချင်တယ်ဆိုရင် Hannibal Rising – Red Dragon/Man Hunter – Silence of the Lambs -Hannibal (movie) ဆိုပြီး recommand ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဟာနီဘဲလ်က Pop Culture မှာနာမည်တော်တော်ကြီးတဲ့ Villain အပြင် ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာလည်း နာမည်အကြီးဆုံး လူသားစားလူသတ်သမားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
သူက လူတွေရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့အတွက် လွယ်လွယ်ကူကူ အေးအေးဆေးဆေး နှိပ်စက်ပြီးမှ သတ်တဲ့နေရာမှာ အထူးကျွမ်းကျင်ပါတယ်Sequel – Hannibal Rising ကားထွက်အပြီးမှာတော့ 2013-2014 လောက်မှာ Hannibal Series ဆိုပြီး Series တစ်ခုထပ်ထွက်ပါတယ် ပြီးတော့ သူနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ Clarice ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လည်း 2021 မှာထွက်တော့မှာပါ